Imibuzo evame ukubuzwa - iNanchang Hot Fashion Co., Ltd.
Shirts & eziqongweni
I-Hot Fashion Co, Ltd. esungulwe ngonyaka ka-2003 ibhizinisi elihlukahlukene elihlanganisa ukwakheka, ukuthuthukiswa kanye nokukhiqizwa kube ukuthunyelwa kwamanye amazwe kanye nokusebenza kwe-e-commerce. Le nkampani itholakala eNanchang City, esifundazweni saseJiangxi, eChina enenethiwekhi enkulu yezixhumanisi zokuhamba. Inamamitha-skwele angama-8250 esisekelo sokukhiqiza sanamuhla kanye nabasebenzi abangama-300. Imfashini eshisayo iyaziwa emkhakheni wezingubo zemidlalo eChina. Futhi manje imikhiqizo yayo isungule ngempumelelo imakethe ye-United States of America, United Kingdom, Japan, Brazil kanye ne-European Union.
I-Hot Fashion Co. Ltd. esungulwe ngonyaka we-2003, okuyibhizinisi elenhlobonhlobo elihlanganisa ukwakhiwa, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ibhizinisi lokuthekelisa, i-e-commerce nokusebenza. Inkampani etholakala eNanchang City enokuhamba okulula. Inamamitha-skwele angama-8250 esisekelo sokukhiqiza sanamuhla kanye nabasebenzi abangama-300.